ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး !! တရားမ၀င်မြန်မာ ၁၄ ဦးသေလုနီးပါးဖြစ် နိုင်ငံကူးဖို့ပွဲစားစောင့်ဆိုင်း – Myanmar Live
ပြီးခဲ့သည့် ၂၂ ရက်နေ့တွင် စွန်းခလားခရိုင် ကလမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိနေအိမ်တစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့်အခြားပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များပိုက်စိတ်တိုက်ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး ၅ ဦး အမျိုး သား ၉ ဦး စုစုပေါင်း ၁၄ ဦး ဖမ်းဆီးမိကြောင်း ယင်းတို့သည်တရားမ၀င်ဝင်ရောက်လာပြီး မလေးရှား နိုင်ငံသို့ဆက်လက်ထွက်ခွာရန်အဆိုပါနေအိမ်တွင်သောင်တင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့သည် မောပန်းနွမ်းနယ်နေပြီး အလွန်ဆာလောင်နေသည်ဟုသိရှိရသည်
တချိန်တည်းတွင် အဆိုပါ ၁၄ ဦးကိုကြီးကြပ်သူဖြစ်သည့် အောင်စနိုင်အမည်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း အိမ်အတွင်းကိုစစ်ဆေးချက်အရအကြိမ်ပေါင်းများစွာလူနေသွား သည့်အချင်းအရာများတွေရှိကြောင်း တံခါးနှင့်ပြူတင်းပေါက်များတွင်လည်းထွက်ပြေးမရနိုင်အောင် အတားအဆီးများထူထပ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်ဟုသိရသည်
မိသားစုကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဘ၀ပြောင်းလဲတိုးတက်ရေးသည်လူတိုင်းလိုလားသည့်အရာဖြစ် သော်ငြားလည်းဥပဒေဘောင်အတွင်းတည်ရှိရမည် ယခုပြစ်မှုသည် မိမိအရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရေးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အလုပ်သမားရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများကိုဆက် သွယ်ပြီး နေရပ်နိုင်ငံနှင့်ထွက်ခွာမည့်နိုင်ငံနှစ်ခုစလုံးတွင်အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ထားရမည် တချိန် တည်းတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(ပတ်စပို့)ဗီဇာနှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်(ဝေါ့ပါမစ်)များကိုလည်းမှန်မှန် ကန်ကန် ပြလုပ်ထားရမည် အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေနှင့် ဥပဒေအရကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရရှိ စေရေးအတွက်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနှစ်ဦးသဘောတူအလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းစာချုပ်ကိုမဖြစ်မနေချုပ်ဆိုထားရမည်။
စာရွက်စာတမ်းပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးပြီးငွေကြေးအလဟသဖြစ်သည် ဟုမရှုမြင်သင့်ပါ တခါတရံတွင် ငွေကြေးအနည်ငယ်စိုက်ထုတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြီးမားသည့် အန္တရာယ်မှတာဆီးကာကွယ်နိုင်မည် တရားမ၀င်ထွက်ခွာခြင်းသည်လုပ်ခလစာမရရှိသည့်အလုပ်သို့ပို့ ဆောင်ခံရခြင်းမှသည်အသက် အန္တရာယ်ထိရှိနိုင်ခြင်းကြောင့် “ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုအေးချမ်းသာယာဖို့အ တွက်ချွေးနဲ့လဲခဲ့သည့်ငွေများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲခွင့်မရခဲ့လျှင် အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်” ကိုရှေးရှုထားရမည်။
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : Dailynews, Department of Employment Thailand
Tagged#Myanmarlivenews #Myanmarlive #Myanmar #Thailand #journal #freecopy #mahachai #samutsakorn #betterlife #newsMyanmarMyanmar live newsMyanmar newsMyanmarliveMyanmarlive #MyanmarNewsThailand
Previous Article လူမှုကွန်ယက်မှာ အမြဲရေပန်းစားနေတဲ့ ‘Nay Chi Oo’ နှင့်ခဏတာ
Next Article ရေလုပ်သားများပျော်ပြီ!! ရေလုပ်သားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေထိုင်းအတည်ပြု အကျုံးဝင်ပြီ